Mameno Ny Kihon-Dalan’i San Juan Tranainy Ny Fetiben’Ny Lalana Masindahy Sebastian Poertorikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2014 21:52 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, Italiano, Español
Ankalazaina isaky ny faran'ny herinandro fahatelo amin'ny volana janoary ilay fetibe an-dalambe malaza fanao ao amin'ny Lalana San Sebastián (Saint Sebastian) amin'ny faritra tranainin'i San Juan, renivohitr'i Puerto Rico. Ho an'ny olona maro, dia io no mamarana tanteraka ny fiafaran'ny vanim-potoanan'ny Krismasy. Ireo izay tsy zatra ny fomba nentim-paharazana PoertoRikana dia mety hieritreritra fa ao amin'ny Lalamben'i San Sebastián ihany no ankalazana azy. Ny zavamisy dia nisy fitomboana be araka ny fandehan'ny fotoana ilay fankalazana ka lasa nihoatra ny fetran'ny arabe, dia lasa mahazo an'i San Juan tranainy iray manontolo, araka ny porofoin'ny video [lahatsary]:
Tamin'ny voalohany ny Fetibe dia natao hanomezam-boninahitra an'i Masindahy Sebastian, teraka tany Narbonne, Frantsa, izay lasa maritiora noho ny tsy fihemorana tamin'ny finoana kristiana nandritra ny taonjato fahatelo CE. Eo amin'ny fanehoana an-tsary Katolika, dia aseho amin'ny alalan'ny tsipika maro sy mifatotra amin'ny hazo iray izy.
Nandritra ny taompolo 1950, ny fankalazana nentin-drazan'ny fetibe ho fankalazana an'i Masindahy Sebastian no fomba fanangonam-bola hanamboaran-trano tao amin'ny fiangonan'i San José tao amin'ny San Juan Tranainy. Tsy nitohy ilay fomba hatramin'ny 1970 taona maromaro taty aoriana, rehefa nanolo-kevitra tamin'i Rafaela Balladares, a resident of San Sebastián Street hanohy ilay fomba ilay arkeology, mpahay tantara, ary anthropology Ricardo Alegría. Izany no fomba nahaterahan'ilay Fetibe, ary ny andiany faha-44 no ankalazaina amin'ity taona ity.
Eto aho no mizara ny sasantsasany amin'ny sary nopihako nandritra ny fitsidihako ny fetiben'ny tamin'ity taona ity:
Ity no Calle del Cristo (Lalan'i Kristy), izay andalovan'ny olona maro hankanesana ho any amin'ny Lalana San Sebastián.
Manoloana ny Ivontoeran'ny Fianarana Ambony ao Puerto Rico sy Karaiba ao Calle del Cristo, foiben-toeran'ny Komity Mpanomana ny Fetiben'ny Lalana San Sebastián, sy ahitana ny boky, asa tanana ary asa maro hafa.
Cabezudos (Loha Goavana) karazana sarontava ampiasaina amin'ny filaharambe nentim-paharazana amin'ny Lalamben'i San Sebastián. Cabezudos vita amin'ny tahiry fanao amin'ny tantara tsangana iraisana Agua, Sol y Sereno (Rano, Masoandro ary Fanginana), izay atao tolotra ao amin'ny Plaza de la Barandilla.
Fary vao notapahina hita ao amin'ny kioska hita ao amin'ny Ivontoeran'ny Fianarana Ambony ao Puerto Rico sy Karaiba.
Ny Guarapo dia fanalanahetaheta vita amin'ny fary. Sarotra tanehina satria maka fotoana be dia be ny manindry azy.
La Plaza Colón (Kianjan'i Columbus) iray amin'ny toerana ivondronan'ny olona hanangonan-tsonia hamoahana ilay gadra politika Oscar López Rivera.